AOL Whitelist - Maitiro Ekuita Whitelist neAOL
Chipiri, Gunyana 11, 2007 Chipiri, July 15, 2014 Douglas Karr
Zvichida nekuti ichiri chimwe cheakakura kwazvo ISP uye yakanyanya kunetsekana nezvemaemail, AOL chaizvo ine inonakidza Postmaster sevhisi online. Ini ndaifanirwa kutaura navo kana mutengi akataura kuti ivo vaine matambudziko neemail kuenda kuAOL email kero. Chokwadi chakakwana, takaona kuti IP kero dzechikumbiro chedu dzaive dzakavharwa.
Izvo zvinoita sekunge zvinotyisa, sekunge isu taive spammer kana chimwe chinhu ... asi isu hatisi. Ese maemail edu ndeekutengeserana kana kukoka mune zvakasikwa. Muchokwadi, hapana maemail ekushambadzira anobuda mune aya kero. Ndakadaidza shamwari yakanaka uye guru rekudzikunura, Greg Kraios, uye akandisimudza pamwe neruzivo rwekuonana nevaposta veAOL pamwe ne AOL Postmaster webhusaiti. Ndakavapa runhare uye vakandizivisa matanho api andingatore kuti ndisunungurwe uye ndipinde munhepfenyuro.
Ndakawana dambudziko redu hombe nderekuti system yedu yaitumira kune zvisiri izvo maAOL maakaundi maakaundi needu Reverse DNS yekutarisa yakaremara. Reverse DNS inzira yeIP kuti utarise yako domain uye nekambani ruzivo neIP kero yairi kubva. Nekuidzima, takaita senge spammer. Nekero dzakashata dzakaringana - AOL yakasarudza kutarisa kuti isu taive vanaani. Ivo pavakatadza kuziva kuti tiri vanaani, vakativharira. Zvine musoro! Handikwanise kutaura kuti ndinovapa mhosva.
Mushure mekunge tawana Reverse DNS inogoneswa, AOL yakadonhedza block. Ini ndakataurawo neboka redu reVatengesi ndikavaudza kuti varege kuita mademo neAOL email kero (ndivo vari nyore kunyora mukati, handizvo here?). Mushure mekudonhedzwa kwebhokisi, unobvumidzwa kunyorera kuti uchenese kuburikidza nePostmaster saiti. Ini ndanyorera kanokwana gumi nemaviri - asi nekukurumidza ndakazoona kuti madhadha ako anofanira kunge ari mumutsara usati waigona.
Isu takagonesa iyo Reverse DNS Lookup pane yega yega IP Kero iyo yatinotumira email kubva.
Isu taifanirwa kumisikidza mhinduro email kero yeAOL kuti itinyore kana paine nyaya dzeemail. Isu takagadzirisa kushungurudzwa @. Tichiri kushanda kumisikidza yakatarwa email musoro we "Zvikanganiso-Ku" asi ichi ndicho chikuru kutanga.
Takatofanira kumirira mazuva mashoma tavharirwa.
Domain yako inofanira kuenderana neiyo dura mune yako yekubata uye mhinduro loop email kero. Unogona kunyoresa yako FBL email kero neAOL.
Kana iwe uine matunhu akasiyana, iwe unofanirwa kunyorera yega yega.
Ive neshuwa yekutarisa iyo email kero iwe yawakaendesa nayo. Iwe unofanirwa kudzvanya yekusimbisa chinongedzo vasati vashande pane chako whitelist chikumbiro.
Chekupedzisira nhanho kumirira mhinduro. Kana iwe ukarambwa, iwe unogona kufonera ivo Postmasters uye uvape iyo yekunongedzera id. Izvi zvichavatendera kuti vakurumidze kuitarisa kuti vaone kuti chii chakashata. Kumira kuti uite izvi nguva shoma!
Ndiri kutarisira zuva iro isu patinogona kusundira aya maemail kunze kwedu email service provider's system saka hatifanirwe kunetseka nezvayo! Ndiri kumirira kuburitswa zviri pamutemo kwavo kwema transactionional email system (iyo yandakabatsira kutsanangura!) Pamwe nekumwe kukura mukambani medu. Tikakurumidza kushandisa kwavo kuendesa masevhisi, zvirinani!
AOL ine mamwe masevhisi akanaka ePostmaster, asi ini zvirinani kuti isu tisatombofanirana nemusoro wemusoro zvachose. Kamwe katsamba, kana iwe uchishamisika kuti kana kwete ini ndinoita hanya navo kutivharira isu kana kunetseka kuri kutora kuti titendese isu… kwete zvachose. Ini ndinoda kuona kambani yakangwarira nezve SPAM uye ichichengeta vatengi vayo.
Zvakatora kuyedza kwakati wandei tisati tane nhoroondo yekutumira yeAOL kuti vachenurwe, asi ivo vakaita mushure mekuyedza kushoma.
Chikumbiro chako cheWhitelist, pamwe nekodhi yekusimbisa xxxxxxxx-xxxxxx, yabvumidzwa.
Hauna chokwadi kana maemail ako ari kuvharirwa kana kwete? Ive neshuwa yekushandisa iyo Inbox Kuiswa yekutarisa chishandiso kutsvaga uye kugadzirisa matambudziko akanangana neIPP.
Tags: 250okAOLaol blacklistaol postmasteraol chenayakavhara emailfblfeedback loopinbox kuiswainternet service providerispjunk firitaspamzvichemo zve spamspam firita
Chii chinonzi Interactive Kushambadzira?